ငါ့ကိုနင်မေ့သွားတဲ့အခါ..သေချာတာတစ်ခုက..ငါနင့်ကိုမမေ့ပါ: မြင်မြင်ချင်း ပတ်ပျိုး
ငါ့အချစ်က ကြီးကျယ်နေရော့သလား ..... ။
ငါမေ့လျော့ခဲ့၏ .... ။
` အော် ... ဒါဟာအချစ်လား ´
ငါတကယ်ပဲ နစ်မြုပ်ရတော့မည်လား ........... ။
မိန်းခလေးရယ် ..... ။
လှချင်တိုင် လှနေရတာလဲ ..... ???
အချိုးကျသီကုံးရတော့မည်လေ ..... ။
( ဘုရား.......ဘုရား...........ကံကောင်းပါစေ )
Posted by mhyaw lint at 5:40 AM
Labels: အချစ်သစ်တဖန်စတင်ခြင်း ကဗျာ